China Humidity chiratidzo kadhi mugadziri akagadziridzwa 6-poindi humidity kadhi kuchengetedza kwezvakatipoteredza fekitori uye vagadziri | Kunyengera
Muna 2004, mutemo weEU wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza (2004/73 / EC) wakanyora cobalt oxide sekirasi II carcinogen, iyo yava kurambidzwa nekobalt humidity kadhi chiratidzo. Zvese zvigadzirwa zvinotumirwa kune EU nyika zvinofanirwa kutevedzera mutemo. Naizvozvo, iyo inonyanyo shandiswa humidity chiratidzo kadhi (kubva bhuruu kuenda kupinki), chikuru chinhu icho cobalt oxide, ichakurumidza kurambidzwa.
Kuti usangane nemitemo inokodzera uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvinodiwa, neume Elektroniki Zvishandiso Co, Ltd. yakagadzira chizvarwa chitsva chekuchengetedza kwezvakatipoteredza humidity chiratidzo kadhi (mhando I, II, III), uye yakavandudza maitiro ekugadzira kadhi rechiratidzo. padanho repamusoro. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa inoenderana neEuropean Union RoHS Directive (isina kubatanidzwa), yapasa iyo CTI / SGS bvunzo, zvichiratidza kuti shanduko yemuvara iri pachena, hunhu hwakanakisa, uye kushandiswa kuri nyore.
Gjb2494-95 (muyero wemauto wevanhu Republic of China)
Mil-ib835a (US mauto kuputira)
Jeoec (zvigadzirwa zvemagetsi indasitiri yemubatanidzwa)
Kavha zvemagetsi zvemagetsi zvinoriumba, oparesheni michina, inonzwisisika zvikamu
Mhando dzese dzekuputira
IC / revatema / redunhu bhodhi, etc.
Kana hunyoro hwezvakatipoteredza hwasvika kana kukosha kwenzvimbo inoratidza pane kadhi rechiratidzo chemunyoro, chinongedzo chinoshanduka kubva paruvara rwakaoma kusvika paguru rehunhu.
Kana hunyoro hwezvakatipoteredza hwadzikira, ruvara rwezvinongedzo pakadhi rechiratidzo rinoshanduka kubva pauvara husina kuchena kusvika pakuoma.
Kana ruvara rwechinongedzo ruchichinjika kune iro rakatarwa vara, kukosha kwacho kuchinhu kukosha kwehunyoro kwenzvimbo yazvino.
Uye inogona kuve yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nevatengi uye nezvinodiwa.
Kavha uye kuchengetedza
1. Iko kurongedza kwemukati kwakasimbiswa bhegi uye yekunze simbi tinplate, uye yekunze kurongedza ikatoni, 2400pcs / bhokisi / 5 magaba
2. Iyo kadhi yehumidhi kadhi inofanirwa kuiswa mucherechedzo musimbi ine desiccant. Ndokumbirawo kutsiva iyo desiccant mushure mekuti pasuru yavhurwa katatu.
3. Chengeta munzvimbo yakaoma uye inotonhorera, dzivisa zuva rakananga uye kunyudzwa mumvura.
Pashure: Thickened aruminiyamu foil bhegi aruminiyamu foil yekutsiva bhegi inogona kuve yakagadzirirwa chikafu kurongedza bhegi tii kurongedza bhegi yakachena aluminium pepa bhegi
Zvadaro: Bhandige mask muchina Mugadziri
Anti Static Bubble Mucheka
Kavha Bubble Bhegi
Imwe Dhonza Imwe Mask Machine, Mutsvuku Wekutsvuka, Chiso Mask Machine, Mask Mugadziri, Kavha Bubble Bhegi, Anti Static Bubble Mucheka,